तपाईंहरूलाई टाउको दुख्ने समस्या छ ? - Mitho Khabar
January 22, 2020 January 22, 2020 mithokhabarLeaveaComment on तपाईंहरूलाई टाउको दुख्ने समस्या छ ?
तपाईंहरूलाई टाउको दुख्ने समस्या छ रु कुनै न कुनै बेला टाउको दुखेको होला। यतिबेला टाउको दुखाइ धेरैको समस्याको रूपमा देखिएको छ। यो सबै उमेरकालाई हुन सक्छ। तर दुखाइ भने मान्छेपिच्छे फरक हुन्छ। कसैलाई चर्को र कसैलाई हल्का गरी दुखेको हुन्छ।
त्यसै गरी कसैलाई धेरै दिनसम्म लगातार दुखेको हुन्छ भने कसैलाई पाँचदश मिनेट दुखेर कम हुन्छ त कसैलाई रिँगटा र बान्ता हुने गरी दुख्छ। दुखाइको मापन भने गर्न सकिँदैन। कोही एक व्यक्तिलाई हल्का दुखाइ भएको त्यही दुखाइ अर्कालाई चर्को हुन सक्छ। दुखाइको कुरा मान्छेको मानसिक स्थिति र उसको स्वास्थ्य अवस्थामा भर पर्छ।